Tsirin’Orinasa Nizeriana Mamorona Tontolo Vaovaon’ny Olo-mahery Afrikanina · Global Voices teny Malagasy
Tsirin'Orinasa Nizeriana Mamorona Tontolo Vaovaon'ny Olo-mahery Afrikanina
Voadika ny 21 Marsa 2016 7:54 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, македонски, Español, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Dansk, English
Sary: Comic Republic (Repoblikan'ny Tantara an-tsary)
Ity lahatsoratra nosoratan'i Kenny Sokan ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 26 Febroary 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Eo amin'ny tontolon'ny olo-mahery (superhero), dia vitsy ny ankoatra ny fotsy hoditra. Ambinambin-javatra ny fampidirana ny kolontsaina ara-pokon'izy ireo. Saingy namorona tontolon'ny olo-mahery tena Afrikanina fotsiny ny Comic Republic, tsirin'orinasa Nizeriana iray miorina ao Lagos.
Tamin'ny 2013 no nanombohan'ny mpilalao fototra mitondra ny fanevan'ny Comic Republic antsoina hoe Guardian Prime, mpiaro ny zanak'olombelona. “Mifototra fotsiny indrindra amin'ny fitokisana ny tena izy. Fitokisana ny tena. Amin'ny ankapobeny, miezaka izahay miteny hoe raha mino ianao fa afaka manao ny zavatra rehetra, dia vitanao izany,” hoy ny Tale Jeneraly Jide Martin. “Ny hany fetra amin'izany, dia izay apetrakao ho an'ny tenanao … izay tokotanin'ny heriny. Tahaka ny singa fahadimy izy. Antsointsika hoe tànan'Andriamanitra izy. Ary matanjaka izy, faingana sady tsy andairam-pamelezana araka ny inoany“.
Miorim-paka amin'ny fitondra-tena ny mpilalao horonantsarin'i Martin, zavatra antenain'ny Comic Republic fa hiverina any amin'ny fototry ny herimpo.
Izy no Mpiambina teraka ho an'ny zanak'olombelona isaky ny 2000 taona. Sary: Comic Republic
“Manomboka manadino ny dikan'ny maha-olombelona isika, na tsy manome lanja ny soa, ny rariny … Ary satria niova ny fironantsika,” hoy i Martin. “Na dia ny tantara an-tsary amin'izao fotoana izao, avy any amin'ireo mpamokatra lehibe aza efa manomboka manadino izany hevitra izany.”
“Amin'ny ankapobeny, miezaka izahay miantoka fa ny maherifontsika rehetra dia hiafara amin'ny fitondran-tena tsara milaza hoe: manaova ny tsara, tsarà toetra ary dia ho tsara aminao ny fiainana”.
Tsy tahaka ny Storm (Tafio-drivotra) an'i Marvel tamin'ny andian-tantarany X-Men sy Black Panther, izay samy avy amin'ny firenena noforonina Wakanda ao Afrika, dia teraka sy nihalehibe tao Afrika ireo mpilalao an'i Martin ireo.
Voafatotry ny fianianana hihaza ny alina ho toy ny herin'ny famaliana, anarana maro no niantsoan'ny ao an-tanàna azy, saingy iray ihany no miako. ERU, ilay tahotra tenany, no miaraka amintsika. Sary nampindramin'i Comic Republic
Mpampianatra any amin'ny Oniversiten'i Lagos i Eric Kukoyi, ary miasa tapak'andro ihany koa amin'ny maha-mpitsabo aretin-tsaina sy ny parapsykolojia (haitoetra ivelam-pitsipika). Amin'ny alina izy miady amin'ny asan-jiolahy, lasa Eru, fanafohezana ny iberu, izay midika hoe tahotra amin'ny teny Yoruba.
“[Izy no] maha-izy ny tahotry ny tahotra voafandrika ao amin'ny olona iray”, hoy i Martin.
Ireti, izay midika hoe fanantenana amin'ny teny Yoruba, dia vokatry ny fifanarahana teo amin'ny mpanjaka sy ny andriamanitra Yoruba iray. Notezaina ravehivavy ho lasa mpiady lehibe manana fahefana mihoatra noho ny olombelona, mitondra tafika, mandresy ny fanjakana fahavalo, manompo miaro ny fokony.
Ireti: ny tantarany dia iray amin'ireo tantara tsy lazaina tsy misy fo handevona azy; tsy tian'ny kanosa ny anganony ary tsy sahin'ny ratsy ratsy ny maninana azy. Sary: Comic Republic
Manantena hampitombo ny famakiana ny tantara an-tsary any Nizeria, nataon'ny Comic Republic ho azo trohina maimaimpoana ao amin'ny tranonkalany ny tantara an-tsariny.
Nanomboka tamin'ny (fitrohana) download miisa 100 ny orinasa tamin'ny fivoahany voalohany ary niakatra 300 taorian'ny volana voalohany. Nampiseho fitrohana 38.000 ny fanisana vao haingana tamin'ny fivoahana farany. Saingy mihevitra i Martin fa mbola hitombo kokoa ny isan'ny olona namaky ny tantara an-tsary mitohy satria afaka mizara azy ireo ny olona.
“Tao anatin'ny herintaona, tsy nitsaha-mitombo hatrany ny mpankafy anay eny ifotony. … Tamin'ity taona ity, nahadona tampoka ny haino aman-jery izahay ary nankafy anay izao tontolo izao. Mahagaga izany, raha ny marina “, hoy i Martin. Ny mpamaky dia eo amin'ny 40 isanjato eo no avy any Etazonia, 30 isanjato avy any Nizeria, 20 isanjato avy any Eoropa sy ny 10 isanjato ambiny dia avy amin'izao tontolo izao.
Mba hahazoana vola, dia manatontosa tetikasa hafa miaraka amin'ny fikambanana isan-karazany ny Comic Republic.Tamin'ny 2015, niara-niasa tamin'ireo mpikarakara ny Amboaran'ny Hoavy Afrikanina izy, nanoritra ireo 55 voatendry ho olo-mahery fo. Manana tetikasa ihany koa izy ankehitriny miaraka amin'ny ONG misahana ny fanabeazana miatrika ny tazomoka, manatontosa tantara an-tsary manokana momba ny Olo-mahery izay mitety tanàna, miady amin'ny tazomoka, mampianatra ny olona ny tokony hatao. Nanao asa tahaka izany ho an'ny fivarotam-panafody sy ny tranonkala ara-barotra ihany koa ny tsirin'orinasa.
Nopetahan'ireo mpankafy anarana hoe “Mpamaly fatin'i Afrika” ireo mpilalao an'ny Comic Republic ary manantena i Martin fa ho goavana tahaka ny ekipan'i Marvel izy ireo indray andro any.
“Manantena aho fa ho lasa anarana an-trano tahaka ireo lehibe roa izahay. Ny tiako ho lazaina dia hoe, manantena aho fa raha te hiresaka momba ny tantara an-tsary ny olona, dia hanonona ny ‘Comic Republic, DC ary Marvel,’ “hoy i Martin. “Manantena aho fa afaka hiteny ny ankizy hoe: ‘Inona no tian'i Guardian Prime atao?'”